မည်သည့်အမေရိကန်ပြည်နယ်များ၏ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးသုံးဦးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမိမိခင်ပွန်းအစားထိုး။ အတော်များများကနောက်ပိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများကိုဝန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်အတွက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ကြခြင်းသို့မဟုတ်လက်ရှိအောင်မြင်ခဲ့ကြပြီ။ ဤတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိမိန်းမများဝန်များ၏စာရင်းကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနိုင်ဖို့အတွက်ဖွင့်:
Nelly Tayloe ရော့စ်
Wyoming, ဒီမိုကရက်, 1925 - 1927
မိရိအံသည် "မာရင်းကျို" ဖာဂူဆန်
တက္ကဆက်ပြည်နယ်, ဒီမိုကရက်, 1925 - 1927, 1933 - 1935
Alabama အဘိဓါန်, ဒီမိုကရက်, 1967 - 1968
Connecticut, ဒီမိုကရက်, 1975 - 1980
Dixy Lee က Ray
ဝါရှင်တန်, ဒီမိုကရက်, 1977 - 1981
New Hampshire, ရီပတ်ဘလီကန်, 1982 - 1983
မာသ Layne Collins
ကင်တပ်ကီ, ဒီမိုကရက်, 1984 - 1987
အဆိုပါ 1984 ဒီမိုကရက်တစ်အမျိုးသားကွန်ဗင်းရှင်း၏ဥက္ကဋ္ဌ
ဗားမောင့်, ဒီမိုကရက်, 1985 - 1991
Nebraska, ရီပတ်ဘလီကန်, 1987 - 1991
အရီဇိုးနား, ဒီမိုကရက်, 1988 - 1991
Kansas ပြည်နယ်, ဒီမိုကရက်, 1991 - 1995
တက္ကဆက်ပြည်နယ်, ဒီမိုကရက်, 1991 - 1995
အော်ရီဂွန်, ဒီမိုကရက်, 1991 - 1995
ခရစ္စ Todd Whitman
နယူးဂျာစီပြည်နယ်, ရီပတ်ဘလီကန်, 1994 - 2001
ဂျိန်း Dee Hull
အရီဇိုးနား, ရီပတ်ဘလီကန်, 1997 - 2003
New Hampshire, ဒီမိုကရက်, 1997 - 2003
အောင်မြင်စွာ 2008 ခုနှစ်, 2002 ခုနှစ်အမေရိကန်ဆီးနိတ်လွှတ်တော်အဘို့အမအောင်မြင်သို့ပွေးလေ၏
အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်, ရီပတ်ဘလီကန်, 1998 - 1999
ယခင်အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်သို့ပြောင်းရွှေ့လာသောအခါ 11 ရက်အတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်ရက်ချိန်းကိုဖန်ဆင်းခင်
မက်ဆာချူးဆက်, ရီပတ်ဘလီကန်, 2001 - 2003
montana, ရီပတ်ဘလီကန်, 2001 - 2005
Puerto Rico, လူကြိုက်များသောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ, 2001 - 2005
စန်း Juan ဟောင်းမြို့တော်ဝန်
ဝဲ, ဒီမိုကရက်, 2001 - 2009
ဟာဝိုင်ယီ, ရီပတ်ဘလီကန်, 2002 - 2010
မီချီဂန်, ဒီမိုကရက်, 2003 - 2011
Janet Napolitano အား
အရီဇိုးနား, ဒီမိုကရက်, 2003 - 2009
Kansas ပြည်နယ်, ဒီမိုကရက်, 2003 - 2009
Oline Walker က
utah, ရီပတ်ဘလီကန်, 2003 - 2005
ဖက်ဒရယ်အနေအထားကို ယူ. , အဘယ်သူသည်လက်ရှိအရာ၌နန်းထိုင်
Louisiana, ဒီမိုကရက်, 2004 - 2008
Connecticut, ရီပတ်ဘလီကန်, 2004 - 2011
ဝါရှင်တန်, ဒီမိုကရက်, 2004 - 2013
alaska, ရီပတ်ဘလီကန်, 2006 - 2009
Wasilla ဟောင်းမြို့တော်ဝန်; Alaska ၏ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး; အဓိကပါတီ (2008) ၏သမ္မတလောင်းအဖြစ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဘို့ကို run ဖို့ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး; သည်အခြားရည်မှန်းချက်တွေကို 2009 ခုနှစ်ကနုတ်ထွက်
မြောက်ကာရိုလိုင်းနား, ဒီမိုကရက်, 2009 - 2013
အရီဇိုးနား, ရီပတ်ဘလီကန်, 2009 -
ပြည်နယ်အရီဇိုးနားအတွင်းရေးမှူးသူမကအမိမြေလုံခြုံရေးအတွင်းရေးမှူးဖွစျလာသူအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Janet Napolitano အား, အရာ၌နန်းထိုင်သောအခါ, အရီဇိုးနားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်အစေခံရန်တတိယဆက်တိုက်အမျိုးသမီးတစ်ဦး
နယူးမက္ကစီကို, ရီပတ်ဘလီကန်, 2011 -
50 ပြည်နယ်မဆိုပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးဟစ်စပန်းနစ်အမေရိကန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး, နယူးမက္ကစီကို၏ပထမဆုံးအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ဥက္ကလာဟိုးမား, ရီပတ်ဘလီကန်, 2011 -
တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနား, ရီပတ်ဘလီကန်, 2011 - 2017
တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားရဲ့ပထမဆုံးအမြိုးသမီးတအုပ်ချုပ်ရေးမှူး, မဆိုပြည်နယ်၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်အစေခံရန်အိန္ဒိယသို့မဟုတ်အာရှနွယ်ဖွားများ၏ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီး; အဆိုပါအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးအဖြစ်ချိန်းပြီးနောက်ရာထူးမှနှုတ်ထွက် ကုလသမဂ္ဂ
New Hampshire, ဒီမိုကရက်, 2013 - 2017
Jeanne Shaheen (အထက်) ပြီးနောက်, ရုံးကျင်းပရန်ဒုတိယအမိန်းမ, သူမကသူမ၏ပြည်နယ်ထဲကနေအမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်သည့်အခါ 2017 ခုနှစ်တွင်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်
Rhode Island, ဒီမိုကရက်, 2015 -
Rhode Island ပြည်နယ်၏ပထမဆုံးအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
အော်ရီဂွန်, ဒီမိုကရက်, 2015 -
ယောဟနျသ Kitzhaber 2016 ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရထို့နောက်နုတ်ထွက်သည့်အခါအော်ရီဂွန်ပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ Emmy Noether
မိဖုရား Artemisia - Halicarnassus ၏ Warrior ဘုရင်မ
ပထမကမ္ဘာစစ် & II ကို: HMS Warspite
အဆိုပါထိပ်တန်း5အများစုမှာငေါ့လူရွှင်တော်များ
စီးပွားရေးဇုန် Utility ကို
Hobie Mirage Drive ကိုလှေစီးနေသည်: တစ်ဦးကငါးဖမ်းစက်
ကောငျးကငျတ Metatron အသိအမှတ်ပြုလုပ်နည်း
စပိနျအမေရိကန်စစ်ပွဲ: သင်္ဘော USS အော်ရီဂွန် (BB-3)
သင့်ရဲ့ရှေ့မီး flash နှင့် Die!
ဒက်ထရွိုက်ကရုဏာ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏တက္ကသိုလ်
သင့်ရဲ့ Homeschooler တစ်အလုပ်ရှာဖွေရေး Choose ကိုကူညီပါလုပ်နည်း
အဆိုပါကို Double-Sharp ကဂီတသင်္ကေတအတွက်
အဘယ်ကြောင့် 'အသောယင်ကောင်၏သခင်' 'ပိတ်ပင်ခံရသို့မဟုတ်စိန်ခေါ်သလဲ?
ဒုတိယ Triumvirate ၏စစ်ပွဲများ: ဖိလိပ္ပုတိုက်ပွဲ
အဘိဓါန်ပွငျသစျအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးပုံပြင်: Reims တစ်ရှန်ပိန်ရညျးအိုးသွားရောက်လည်ပတ်